နေရောင်ထိလို့မရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့  အချစ်ဇာတ်လမ်း Midnight Sun
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့  အချစ်ဇာတ်လမ်း Midnight Sun
18 Jun 2018 . 4:26 PM
နေရောင်ထိလို့မရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့  အချစ်ဇာတ်လမ်း Midnight Sun
ဒီဇာတ်ကားကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ကစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Scott Speer ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ Bella Thorne နဲ့ မင်းသားကတော့ Patrick Schwarzenegger တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Patrick Schwarzenegger ကတော့ ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသားကြီးအာနိုးရဲ့ သားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ အချစ်ဇာတ်ကားဆိုပေမယ့်လို့ သာမန်အချစ်ကားတွေနဲ့မတူဘဲထူးဆန်းတာကတော့ ကောင်မလေးမှာ နေရောင်ထိခံလို့မရတဲ့ Xeroderma Pigmentosum (XP)ဆိုတဲ့ ရောဂါရှိနေတာပါပဲ ။ ဒါကြောင့်သူမဟာငယ်စဉ်ကတည်း က အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင် ကိုတောင်မထွက်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး ကျောင်းစာတွေကို လည်းဖခင်ဖြစ်သူက အိမ်မှာပဲ သင်ကြားပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက မိခင်သေဆုံးသွားတဲ့ အတွက် အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခုဘဝနဲ့ ဖခင်ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ရောဂါသည်တစ်ယောက်နေရာကနေ မင်းသမီးဖြစ်သူ Bella Thorne ကသရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ ငယ်စဉ်ကတည်း က အိမ်အပေါ်ထပ်ကနေအပြင်မှာဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေကိုကြည့်ရင်း စကိတ်စီးနေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ နေရောင်တွေမရှိတော့တဲ့ ညအချိန်မှာ ဂီတာတီးတာကိုဝါသနာပါတဲ့ သူမက ဘူတာအနီး ဂီတာတီးနေစဉ် မင်းသားဖြစ်သူ Patrick Schwarzenegger ကရောက်လာပြီး သူမကို စိတ်ဝင်စားတာကြောင့်မေးခွန်းတွေမေးပါတော့တယ်။
အဲ့လိုမေးတော့ သူအမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ စကိတ်စီးတဲ့ကောင်လေးမှန်း သူမသိသွားပြီး ရင်ခုန်သံတွေမြန်ဆန်လာကာ သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ၊ကောင်မလေးမှာ ရောဂါဖြစ်နေတာကို ကောင်လေးကဘယ်အချန်သိသွားမလဲ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေချစ်သူဖြစ်သွားမှာလဲ ၊ ကောင်မလေးရဲ့  အဖေကရောသဘောတူပါ့မလား ဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ Midnight Sun ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့နော်….
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Box Office ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၃.၃မီလီယံ အထိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဘတ်ဂျတ်အနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၈ မီလီယံကုန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နရေောငျထိလို့မရတဲ့ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အခဈြဇာတျလမျး Midnight Sun
ဒီဇာတျကားကို အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ မတျလ ၂၃ ရကျနကေ့စတငျပွသခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈ခုနှဈအတှကျ အမရေိကနျအခဈြဇာတျလမျးတဈခုဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာ Scott Speer ကရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ မငျးသမီးကတော့ Bella Thorne နဲ့ မငျးသားကတော့ Patrick Schwarzenegger တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ Patrick Schwarzenegger ကတော့ ဟောလီးဝုဒျရဲ့နာမညျကြျော မငျးသားကွီးအာနိုးရဲ့ သားဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ အခဈြဇာတျကားဆိုပမေယျ့လို့ သာမနျအခဈြကားတှနေဲ့မတူဘဲထူးဆနျးတာကတော့ ကောငျမလေးမှာ နရေောငျထိခံလို့မရတဲ့ Xeroderma Pigmentosum (XP)ဆိုတဲ့ ရောဂါရှိနတောပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့သူမဟာငယျစဉျကတညျး က အိမျထဲကနအေိမျပွငျ ကိုတောငျမထှကျရတဲ့ သူတဈယောကျအနနေဲ့ နထေိုငျခဲ့ရပွီး ကြောငျးစာတှကေို လညျးဖခငျဖွဈသူက အိမျမှာပဲ သငျကွားပေးခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ငယျစဉျကတညျးက မိခငျသဆေုံးသှားတဲ့ အတှကျ အဖတေဈခု သမီးတဈခုဘဝနဲ့ ဖခငျရဲ့စောငျ့ရှောကျမှုအောကျမှာ ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ ရောဂါသညျတဈယောကျနရောကနေ မငျးသမီးဖွဈသူ Bella Thorne ကသရုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ ငယျစဉျကတညျး က အိမျအပျေါထပျကနအေပွငျမှာဆော့ကစားနတေဲ့ ကလေးတှကေိုကွညျ့ရငျး စကိတျစီးနတေဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျကိုနစေ့ဉျစောငျ့ကွညျ့ခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ဆယျကြျောသကျအရှယျရောကျလာတဲ့ အခါမှာတော့ နရေောငျတှမေရှိတော့တဲ့ ညအခြိနျမှာ ဂီတာတီးတာကိုဝါသနာပါတဲ့ သူမက ဘူတာအနီး ဂီတာတီးနစေဉျ မငျးသားဖွဈသူ Patrick Schwarzenegger ကရောကျလာပွီး သူမကို စိတျဝငျစားတာကွောငျ့မေးခှနျးတှမေေးပါတော့တယျ။
အဲ့လိုမေးတော့ သူအမွဲစောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ စကိတျစီးတဲ့ကောငျလေးမှနျး သူမသိသှားပွီး ရငျခုနျသံတှမွေနျဆနျလာကာ သူတို့နှဈယောကျဘာတှဆေကျဖွဈမလဲ၊ကောငျမလေးမှာ ရောဂါဖွဈနတောကို ကောငျလေးကဘယျအခနျြသိသှားမလဲ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဘယျလိုတှခေဈြသူဖွဈသှားမှာလဲ ၊ ကောငျမလေးရဲ့ အဖကေရောသဘောတူပါ့မလား ဆိုတာကိုသိခငျြရငျတော့ Midnight Sun ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးကိုကွညျ့လိုကျတော့နျော….
ဒီဇာတျကားရဲ့ Box Office ဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ၂၃.၃မီလီယံ အထိရှိခဲ့တာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကို ရိုကျကူးဖို့အတှကျဘတျဂတျြအနနေဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂.၈ မီလီယံကုနျကခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။